China Strawberry vagadziri uye vanotengesa | Heritage
Iyo nyowani Strawberry inobva kuLinyi Guta rine mhando yepamusoro uye Yakasarudzika flavour.
Iyo nyowani Strawberry inobva kuLinyi Guta rine mhando yepamusoro uye yakasarudzika flavour.Strawberry kunhuhwirira kwakapfuma, nyama inotapira uye inovava, Heritage yakaomeswa sitirobheri ingangoita 15% hunyoro, kushandiswa kwemhando yepamusoro mahabhurosi, nekutonhora kutonhora mune yakadzika-tembiricha manyuchi, inishuwarenzi acidity uye yakakosha inonhuwirira, uye yakasarudzika flavour.
Hwakanaka mhando, hunyanzvi hwetekinoroji, kumira muyedzo wemusika uye mutengi anotora. Dainty inochengetedza mamiririri echinyakare - manyowani anotapira anotapira, nyama izere uye yakaoma, inovava uye inotapira, uye kuravira Q bounce, mhodzi dzinoonekera zvakajeka, kugadzirisazve muviri kwakakwana uye hakusvavi, zero mafuta, zvigadzirwa zvisina kugadzirwa nemajini.
Tine fekitori redu pachedu uye kutsvaga mahofisi. Tinogona kukupa zvirinyore nemhando dzese dzekutengesa dzakabatana neyedu yekutengesa renji kune Zvinonzwisisika mutengo Zvitsva Zvigadzirwa zveSnack Chikafu cheStrawberry Slice, Mutengesi weChinese, Kubuditsa kunze, Kuchengetedza nehunyanzvi chivimbiso chedu kune mumwe nemumwe.
Mutengo unonzwisisika China Gadzira Strawberry Slice, Chidimbu cheStrawberry, Muzana ramakore idzva, tinosimudzira mweya yedu yebhizinesi "Kubatana, kushingairira, kugona kwakanyanya, hunyanzvi", uye kunamatira kune yedu mutemo "zvichibva pahunhu, kuve kunokatyamadza, kuchirova kweiyo yekutanga kirasi brand" . Isu taizotora uyu mukana wegoridhe kugadzira ramangwana rakajeka.
Isu tinovimba nesimba rakasimba rehunyanzvi uye tinoramba tichigadzira matekinoroji akaomesesa kusangana nezvinodiwa neChina Nyowani Chigadzirwa Chinese Natural Friji Yakaomeswa Strawberry Flakes, Tinogamuchira noushamwari tarisiro, masangano emabhizimusi uye vakaroora kubva kwese kwese pasirese kuti vatibate uye titsvake kubatana kwehumwe zvinhu zvakanaka.
China Nyowani Chigadzirwa China Gadzira Yakaomeswa Strawberry, Yakaomeswa Strawberry, Kana iwe uchishuvira pane chero chinhu chedu zvinhu zvichitevera iwe unoona yedu yezvigadzirwa zvinyorwa, ndapota inzwa wakasununguka kutaura nesu kuti tibvunze. Iwe uchakwanisa kutitumira maemail uye nekuonana nesu kuti ubvunze uye isu tinokupindura iwe nekukurumidza isu patinokwanisa. Kana zvichikwanisika, unogona kutsvaga kero yedu muwebhusaiti yedu uye uuye kubhizinesi redu. kana rumwe ruzivo rwezvinhu zvedu uri wega. Isu takagara takagadzirira kuvaka hukama hwakareba uye hwakadzikama hwekudyidzana nevamwe vangangoita vatengi mukati meminda yakabatana.
Yakaomeswa Strawberry Chips
Yakaomeswa Strawberry Zvimedu
Kusunungura Dried Strawberry Zvimedu